Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » CHAỊ! BMW 8 Series Gran Coupe Special Edition
BMW 8 Series Gran Coupe dị okomoko ga -ere maka mbipụta onye nchịkọta nwere oke mgbe emechara ya na ụwa na Frieze Los Angeles na February 2022. Na 2010, onye omenkà America emebelarị ụgbọ ala BMW M3 GT2 nke rụrụ na elekere 24 nke Le. Mans agbụrụ.
Jeff Koons, ya na Oliver Zipse, Onye isi oche nke Board of Management, BMW AG, kwupụtara taa na onye na -ese ihe ga -emepụta mbipụta pụrụ iche nke M850i ​​xDrive Gran Coupe.
Okomoko 8 Series Gran Coupe ga -ere maka mbipụta onye nchịkọta nwere oke mgbe emechara ụwa ya na Frieze Los Angeles na Febụwarị 2022. Na 2010, onye omenkà America emebelarị BMW M3 GT2 Art Car nke rụrụ na elekere 24 nke Le Mans. agbụrụ.
Jeff Koons: "Enwere m obi anụrị na nsọpụrụ maka ohere mụ na BMW rụkọ ọrụ ọzọ na ịmepụta ụgbọ ala mbipụta pụrụ iche."
Ugbu a, a na -emepụta ụgbọala ndị ahụ na nzuzo na BMW Group Plant Dingolfing, Bavaria. N'oge ihe omume pụrụ iche na Pinakothek der Moderne ụbọchị ole na ole tupu mmalite nke IAA MOBILITY 2021, ekpughere nlele mbụ na nkọwa dị nso.
IHE 8 X JEFF KOONS bụ ngosipụta nke izizi, imezi ihe na nka, nke nwere agba nwere ọtụtụ ihe na-ewe awa 285 iji tinye n'ụgbọ ala ọ bụla. Ngosipụta na -adọrọ adọrọ na -agwakọta agba mpụta iri na otu dị iche iche sitere na acha anụnụ anụnụ ruo ọla ọcha yana site na odo ruo oji. Naanị ụgbọ ala abụọ ka a ga -emepụta kwa izu. Ime ime nwere ọtụtụ agba nwere ihe ndị dị elu, ezigbo akpụkpọ anụ na mkpuchi mkpuchi ihe nwere baajị mbipụta na mbinye aka nke onye na-ese ihe. Ejiri agba na-acha ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụ nke ụlọ ọrụ BMW M. Nhazi ahụ gụnyere akụkụ abụọ nke nka nka yana usoro geometric na-asọpụrụ 8 contours na ọdịdị dị mgbagwoju anya nke Gran Series.
Doris Fleischer kwuru
Ụlọ ọrụ BMW Group na Ọchịchị